Paseji Uda Ule - Uzo di iche iche maka imewe
Tọzdee, Septemba 6, 2012 Tọzdee, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Ndị na-akwado teknụzụ wepụtara otu n'ime ihe omuma ama ama ama nke anyi huru.Mpempe akwụkwọ , na-akpọ Ọdịda Pụta kacha mma.Mpempe akwụkwọ bụ nnọọ mfe iji onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị na ike n'ezie na-ewu si ọdịda peeji nke na otu ihe ngwọta.
Blukpụrụ nke Peeji zuru ezu nke nnwale peeji: Ibe odida na-abanye otu ihe nwere ike ime. Enwere ike iji blọtọ ụlọ dị n'okpuru ebe a dị ka ihe nduzi mgbe ị na-akọwa ma na -emepụta ibe ọdịda zuru oke nke gị!
Ndị na-arụ ọrụ na KISSmetrics ekpochapụla peeji ọdịda na nke mara mma, na-enye gị mmebi nke ebe ị kwesịrị ịnwale.
Tags: ule uleọdịda pageimebe peejiule peejinnwale dị iche iche
Sep 6, 2012 na 12:28 PM
Daalụ maka ịkekọrịta nnukwu infographic! Enwere m obi ụtọ ịhụ ka posts na-emebi ihe iji nwalee ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-ere ahịa ka mma.